UMaduka akafuni ukwanda kakhulu ngegoli eliphikiwe - Impempe
UMaduka akafuni ukwanda kakhulu ngegoli eliphikiwe
UJohn Maduka oqeqesha iBloemfontein Celtic akafunanga ukunkanta kakhulu ngegoli abaliphikelwe ngesikhathi bebhekene neMamelodi Sundowns emdlalweni weDStv Premiership, eLoftus Stadium, ePitoli, ngoLwesibili.
Empeleni lo mqeqeshi uthe bona babone sengathi bekuyi off-side yize ebengakabi naso isiqiniseko ngoba ubengakayiboni ivideo. Igoli lingene ngesiwombe sesibili lishaywa nguHarris Tchilimbou, kanti abaningi babone sengathi bekungeyona i-off side, kubalwa nabasakaza ibhola kwiSuperSport.
Umdlalo ugcine uphele ngo 0-0.
“Ngicabanga ukuthi yinto okumele ngiphinde ngiyibheke. Kubukeke sengathi kunomdlali obemenza angabi yi-off side kodwa yinto okunzima ukuphawula ngayo kuze kube ubona ivideo. Kodwa kubukeke sengathi yi-off side uma ububuka uhleli lapho besihleli khona,” kusho uMaduka.
Mayelana nomdlalo lo mqeqeshi uthe ujabule ngendlela abadlale ngayo bebhekene neqembu eliyingozi njengeSundowns.
“Besazi ukuthi kuzoba umdlalo onzima ikakhulukazi ngoba besidlala neSundowns ekhaya layo. Besazi ukuthi bayiqembu elihlaselayo, bazoza kithina kodwa besihlele ukuthi siqine emuva. Sibavumele ukuthi baphathe ibhola isikhathi eside futhi besihlele ukubahlasela ngokuzuma. Ngicabanga ukuthi lokhu kusebenzile,” kuchaza uMaduka.
Lo mqeqeshi uthe uzolinda ithimba lodokotela ukuzwa ukuthi uJackson Mabokgwane ulimele kangakanani. UMabokgwane akawuqedanga umdlalo ngenxa yokulimala, kanti indawo yakhe igcine ithathwe uSipho Chaina.
Emdlalweni olandelayo iPhunya Sele Sele izobhekana neChippa United ngoJanuwari 27, eDr Molemela Stadium.
Previous Previous post: UHunt akajabulanga ngendlela iChiefs edlale ngayo kodwa umphumela wona uwuthandile impela
Next Next post: Okwamanje akuhambi kahle: Manqoba Mngqithi